Faty olona tany Antanifotsy: nofotorina lalina ireo miaramila - ewa.mg
Faty olona tany Antanifotsy: nofotorina lalina ireo miaramila
News - Faty olona tany Antanifotsy: nofotorina lalina ireo miaramila
Mbola nitohy, omaly ny dingana famotorana lalina ataon’ny sojaben’ny mpitsara mpanao famotorana etsy Anosy, ireo miaramila miisa 27 lahy. Ahina ho namono sy nahafaty ireo olona efatra, voalaza fa dahalo na jiolahy tany Sahatony ireto “komando” eo anivon’ny RFI ireto. Efa nafindra ao Antanimora ny roapolo tamin’izy ireo raha eny Tsiafahy kosa ireo fito hafa ary ahitana manamboninahitra ny sasany amin’izy ireo.
Anisan’ny nohadihadiana amin’ity raharaha ity ny ben’ny Tanàna ao “Camp Robin”. Eo koa ny fianakavian’ny mpitory sy ny mpiray dina any an-toerana.
Mandra-piandry ny fahavitan’ny famotorana, mbola manjavozavo tanteraka ity raharaha ity. Anisan’izany ny tsy nahitana ilay olona iray tokony ho 50 taona, niaraka amin’ireo telo hita faty tao amin’ny reniranon’i Onive any Antanifotsy. Maty koa sa velona izy io ? Eo koa ny fisian’ny dina roa samihafa ao Ambohimahasoa. Ny iray natsangan’ireto ambara fa dahalo maty ireto ary ny dina iray hafa kosa nataon’ny ben’ny Tanàna, efa lasa depiote amin’izao fotoana izao. Misy tsy fitovian-kevitra izany amin’ny fametrahana fandriampahalemana any an-toerana. Tonga amin’izao faty olona izao ny raharaha.
Manoloana izany, tokony hiverenana dinihina ifotony ny resaka dina tahaka izao. Tompon’andraikitra amin’izany ny fanjakana. Tafiditra ao anatin’izany koa anefa ireo depiote ho tombontsoan’ny vahoaka sy ny faritra ary ny firenena.
L’article Faty olona tany Antanifotsy: nofotorina lalina ireo miaramila a été récupéré chez Newsmada.
Fampindramam-bola :: Mamerina mandinika ny fampitrosana an’ireo mpiasa ny Cnaps
Mandeha indray ny fifampidinihana eo amin’ireo mpikambana ao amin’ny Filankevi-pitantanan’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana ara-tsosialy (Cnaps) momba ny endriky ny fampindramam-bola an’ireo mpiasa amin’ny orinasa tsy miankina. Mandà hatrany an’izao tetikasa nanaovan’ny fanjakana toromarika amin’ny Cnaps mba hanamaivanana ny fahasahiranan’ny mpiasan’ ny tsy miankina noho ny kziry ara-pahasalamana izao ny ankamaroan’ireo mpiasa sy ny sendikaly. «Tsy mbola mandeha ny fampindramam-bola. Mivory (Ndrl: omaly) ny Filankevipitantanana, izay ahitana ny sendika sy ny mpampiasa ary ny fanjakana. Miankina amin’izay tapaka no hampiharana azy. Amin’ny zoma no hahafantarana ny fizotran’ny fampindramam-bola, satria tsy eto Antananarivo ihany no hisitraka azy fa manerana an’i Madagasikara », hoy ny loharanom-baovao avy ao amin’ny Cnaps. Notsindrian’itsy farany fa ny hampiharana an’ity endrika fanampiana iantsorohan’ny Cnaps ity isaky ny faritra mihitsy no tena ifotoran’ny fivorian’ny Filankevi-pitantanana, amin’izao fotoana izao. « Fanampiana fa tsy trosa » Tsiahivina fa vola 200 000 ariary hatramin’ny 500 000 ariary no azo indramina amin’ ity tan-tsoroka ara-bola ity. Amin’ny volana janoary 2021 no hanombohan’ny famerenana ny vola indramina. An-kilany, hanohy hatrany ny fitakiana amin’ny tsy fanekena an’izao fampitrosana izao ry zareo avy ao amin’ny Randrana sendikaly. « Fanampiana no tena ilaina fa tsy fampisamboram-bola. Amin’ny zoma ny fotoananay ho eny amin’ny Cnaps, miaraka amin’ny taratasy misy ny sonia voaangona tamin’ireo mpiasa. Efa feno iray alina, ankehitriny, ireo sonia voaangona. Mihazakazaka daholo ny mpiasa amin’ny tsy fanekena an’io fampitrosàna io. Saika ireo mpiasa naato ara-teknika tamin’ny asany no ankamaroany, ka tsy manana hamerenana ny vola mihitsy. Eo ihany koa ireo am-perinasa », hoy Rakotomanga Barison, sekretera jeneralin’ny sendika SVS, Randrana sendikaly. L’article Fampindramam-bola :: Mamerina mandinika ny fampitrosana an’ireo mpiasa ny Cnaps est apparu en premier sur AoRaha.
KMF/Cnoe : “Tsy ekena ny fanoloran’ny fikambanana kandidà”
Mitsipaka tanteraka. Naneho ny heviny amin’izao hiatrehana ny fifidianana ben’ny Tanàna sy mpanolontsaina izao ny eo anivon’ny KMF/Cnoe. Anisan’ny tsy eken’izy ireo ny firotsahan’ny fikambanana amin’ny fanolorana kandidà na fanohanana.“Mihevitra izahay fa ampy izay ny famelana ny kandidà hirotsaka amin’ny anarana fikambanana. Nanaiky izany ny HCC sy ny mpikarakara ny fifidianana (Ceni) tamin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika, mbola nitranga koa izany tamin’ny fifidianana solombavambahoaka lasa teo.”Io ny fanambaran’ny birao nasionalin’ny KMF/Cnoe Fanabeazana olom-pirenena, “Tsy ekena intsony ny fanoloran’ny fikambanana na “Association” kandidà ho amin’ny fifidianana!”, ny faran’ny herinandro teo.Ekena fa afa-mirotsaka mahaleo tena ny kandindà, araka ny And. 72 amin’ny lalàmpanorenana. Tsy midika izany fa azon’ny fikambanana atao ny mandrotsaka na manohana kandidà amin’ny fifidianana.Mazava ny voalazan’ny And.4 Andl. 2 amin’ny lalàna lah. 2011- 012 mifehy ny antoko politika: tsy afa-manao ireo asa fanaon’ny antoko politika eo ambanin’ny fanasaziana ny fampiharana ny lalàna mifehy ny satan’izy ireo ny fikambanana tsotra na ara-koltoraly. Sarotiny ny KMF/Cnoe Tsy ekena ny fanaovana fitaovana politika ny fikambanana fehezin’ny didy hitsivolana lah. 60-133, ny 3 oktobra 1960, mifehy ny fikambanana amin’ny ankapobeny. Amin’ny maha fikambanana fehezin’izany didy hitsivolana izany, sarotiny ny KMF-Cnoe Fanabeazana Olom-pirenena ny amin’izany.“Manainga ny fikambanana tsy hanaiky hatao fitaovana politika ka hanolotra na hanohana kandidà ho amin’ny fifidianana”, hoy ny fanambarana. Tsy misy fikambanana manana sata milaza fa afa-manao politika eto Madagasikara.Tsy nahazo fankatoavana tamin’ny ambaratongam-pahefana mahefa ny fijoroan’izany fikambanana izany, raha nilaza tao anatin’ny sata mifehy azy fa handrotsaka kandidà na hanohana kandidà amin’ny fifidianana.“Manao antso avo ireo tomponandraikitra voakasik’izany izahay ho fanajana ny lalàna manankery eto amin’ny tany sy ny fanjakana, ary mba hisian’ny fahaiza-manao ny fanaovana politika”, hoy ny- KMF/Cnoe.Ankasitrahan-dry zareo sahady ny tsy haneken’ny Ceni, izay efa nandefasana taratasy fangatahana momba izany, amin’ny alalan’ny Ovec amin’izao fifidianana monisipaly sy kaominaly ary amin’ny fifidianana ho avy rehetra, ny fisian’ny kandidà mirotsaka amin’ny anarana fikambanana.R.Nd.L’article KMF/Cnoe : “Tsy ekena ny fanoloran’ny fikambanana kandidà” a été récupéré chez Newsmada.
PAM: Mpianatra 200.000 no hisitraka ny fanampiana avy amin’i Russie
Sakafo isan’andro. Tontosa ny 09 oktobra 2020 tetsy amin’ny masoivohon’i Russie eto Madagasikara ny fanolorana ireo fanampiana avy amin’ny firenena rosianina. Milanja 502 taonina ny fitambaran’ny fanomezana, izay ahitana voamaina milanja 385 taonina sy menaka 120 taonina. Mitentina iray tapitrisa dolara kosa ny tetibidin’izy rehetra. Entina hanatevenana ireo sakafo ho ampiasaina mandritra ny fandaharan’asa momba ny sakafo any an-tsekoly izay sahanin’ny PAM (Programme Alimentaire Mondial) eto Madagasikara izy ity. Mpianatra 200.000 voasoratra anarana amin’ireo sekolim-panjakana ambaratonga fototra (EPP) any faritra Atsimo no hisitraka izany ho an’ny taom-pianarana 2020- 2021. Anisany fototra iray mampazoto ny mpianatra handeha an-tsekoly ny fanomezana azy ireo sakafo any am-pianarana (cantine scolaire). Fiarahamiasa miaraka amin’ny governemanta Malagasy ary tanterahana miaraka amin’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena ny fandaharan’asa momba ny sakafo any an-tsekoly. Ankehitriny dia efa tafapetraka any amin’ireo EPP miisa 800 manerana ny distrika 11 ao anatin’ny faritra Androy, Anosy ary Atsimo Andrefana izany izany. Hanome sakafo mafana sy manankarena otrikaina ary voalanjalanja mandritra ny fiatrehan’ireo mpianatra ny fampianarana noho izany ny fisian’ity fandaharan’asa ity. “Amin’ny alalan’ireto fanomezana ho an’ny fandaharan’asa momba ny sakafo any an-tsekoly ireto dia manohana ny fanabeazana, ny fahasalamana sy ny sakafo, ny sosialy, fa indrindra ny toekarena eto Madagasikara i Russie. Ny fanomezana sakafo ho an’ny mpianatra dia fampiasam-bola ho an’ny firenena manerana an’izao tontolo izao”, hoy ny Talen’ny PAM eto Madagasikara, Moumini Ouedraogo. Nirina R. Cet article PAM: Mpianatra 200.000 no hisitraka ny fanampiana avy amin’i Russie est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article PAM: Mpianatra 200.000 no hisitraka ny fanampiana avy amin’i Russie a été récupéré chez Délire Madagascar.
Hitarika ny mponin’Antananarivo hanonofy sy hanana faniriana vaovao. Tontosa ny 14 septambra 2021 teny amin’ny lapan’ny tanàna Analakely ny fifanaovan-tsoniam-piarahamiasa teo amin’i Andriantsitohaina Naina, Ben’ny tanànan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra sy i Hasnaine Yavarhoussen, Tale jeneralin’ny groupe Filatex sady Filohan’ny Fonds de Dotation HY na Fonds Yavarhoussen. Ho fampiroboroboana ny kanto sy ny kolontsaina eto Madagasikara no tanjon’ny fiarahamiasa. Amin’ny alalan’ny Fonds Yavarhoussen dia ho haranty eo amin’ny lapan’ny tanàna Analakely ny sangan’ asan’i Andrianomearisoa Joël, mpanakanto Malagasy manana ny toerany eo amin’ny sehatra iraisampirenena. Hotokanana amin’ny fomba ofisialy ny 9 oktobra 2021 ho avy izao ity sary sokitra mitondra ny lohateny hoe: “Eto isika dia manandratra ny nofin’izao tontolo izao”. Azo tsidihin’ny daholobe izy ity aorian’io fotoana io. Hevitra tian’ny mpanankanto ampitaina amin’io sangan’asany io ny hoe: “Sary sikotra hanofisana ny tanàn-dehibe, hanofisana ny renivohitra fa indrindra izao tontolo izao. Hiresahana amin’ny mponina an’Antananarivo sy hanofisana faniriana vaovao indray. […] Ndao hanonofy, hiresaka ireo nofy satria rehefa manonofy dia afaka mamorona rivo-baovao. Eto Antananarivo isika dia manandratra ny nofin’izao tontolo izao”. Nambaran’ny Ben’ny tanàna an’Antananarivo Renivohitra fa ho famantarana fa eto amin’ity toerana ity isika no manandratra ny nofin’izao tontolo izao ny sangan’asan’i Andrianomearisoa Joël. Araka ny fanazavany dia am-pindramin’ny Fonds an’ny kaominina mandritra ny taona maro io sangan’asa io. Nohamafisin’i Hasnaine Yavarhoussen, mpitarika ny vondron’orinasa Filatex fa “eto isika dia manandratra ny nofin’izao tontolo izao” satria eto amin’ity nosy , eo anelanelan’ny moron-tsiraka afrikana sy ny ranomasimbe Indiana ity isika dia manandratra nofy ka ity tany ity no hahatanteraka izany. Ankoatra ity fiarahamiasa ity dia mitohy hatrany ny fanosehana ireo mpanakanto Malagasy amin’ny sehatra isan-karazany ataon’ny Fonds Yavarhoussen ary misokatra ho azy ireo hatrany ny ivon-toerana Hakanto Contemporary. Ra-Nirina Cet article FONDS YAVARHOUSSEN : Handravaka an’Antananarivo Renivohitra ny sangan’asan’i Joël Andrianomearisoa est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article FONDS YAVARHOUSSEN : Handravaka an’Antananarivo Renivohitra ny sangan’asan’i Joël Andrianomearisoa a été récupéré chez Délire Madagascar.